Ungawakhanyisa njani amazinyo efoto nge-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Indlela yokukhanyisa amazinyo kwifoto kunye Photoshop yinto elula kakhulu ukuyenza ngale nkqubo Ukuphinda usebenzise ifoto kwakhona, Siza kuqinisekisa ukuba lonke uncumo esilufotayo lunolu damazinyo akhazimlayo njengeeperile. Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni lonke uncumo olukwimagazini lunamazinyo acocekileyo, amhlophe? impendulo ithi Photoshop.
Ngemizuzu nje embalwa uya kufumana khanyisa uncumo usebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha bedijithali oko kuyakwenza ukuba iiprojekthi zethu zokufota zibe neziphumo ezingcono. Obu buchule bokubamba kwakhona bunokusinceda kuzo zonke iintlobo zeenjongo ngokweemfuno zethu, awuyi kufunda kuphela ukukhanyisa amazinyo kodwa yenza ukhetho oluchanekileyo kwaye usebenze nabanye herramientas Njani i ootitshala.
Fumana uncumo oluhle yinto elula kakhulu enkosi ngoncedo lwe Photoshop kunye namathuba ayo angenasiphelo kwihlabathi le Ukubuyisa ifoto kwakhona. Sisebenzisa izixhobo ezithile siya kuba nakho ukukhanyisa amazinyo oncumo esibafote ngaxeshanye nathi ubuchule bomsebenzi oqeqeshiweyo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile yile retouch ifoto apho ungabona khona uncumo. Nje ukuba sibe nefoto, into elandelayo esiza kuyenza yile yenza ukhetho lwamazinyo, koku sinokusebenzisa naluphi na uhlobo lwesixhobo sokhetho Photoshop. Sinokusebenzisa i isixhobo sokujikeleza semagnethi yenza ukhetho oluchanekileyo kolu hlobo lomsebenzi okanye usebenzise i- imaski ekhawulezayo.
Emva kokwenza ukhetho, into elandelayo ekufuneka siyenzile yenza amanqanaba ohlengahlengiso lwamanqanaba, olu khetho luya kusivumela khanyisa amazinyo asemfanekisweni. Sihambisa iikhosi ngokweemfuno zethu kwaye sisebenzise utshintsho ngokweziphumo esizifunayo.
Emva kokugqiba i-retouch Into yokugqibela ekufuneka siyenzile kukuyisusa kancinci ukuze utshintsho phakathi komphetho wamazinyo kunye nomfanekiso wonke awubonakali kangako. Ukuthambisa i-retouch into ekufuneka siyenzile yile sebenzisa ukufiphala kumanqanaba ohlengahlengiso lwamanqanaba.
Enkosi ngoncedo lwe Photoshop singa fumana uncumo kwisitayile semagazini yefashoni. Awusenaso isingxengxezo, lonke uncumo olulandelayo olwenza ukuba ungafi ngekhamera yakho lunokuncuma njengekhephu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Indlela yokukhanyisa amazinyo efoto nge-Photoshop